जनमत प्रहरीले फुटसल बन्द गर्नु ठीक कि बेठीक ?
राजधानीमा सञ्चालित फुटसल खेलमाथि बिहीबार नेपाल प्रहरीले प्रतिवन्धको घोषणा गर्‍यो । शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फुटसल व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि प्रहरी प्रशासनले फेरि फुटसल खेल्न खेलाउन दिने भएको छ । (हेर्नुहोस् समाचार- काठमाडौंका फुटसल : २४ घण्टा बन्द, फेरि खुल्ला) ? प्रहरीको तर्क के...
पृथ्वीजयन्तीमा सरकारी विदा दिनु ठीक कि बेठीक ?
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउने विषयमा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विवादमा फसेको छ । मन्त्रीहरुवीच यसबारे विवाद बढेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा यसबारे छलफल हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीलगायत राष्ट्रिय एकता...
राष्ट्रप्रमुख पशुपतिनाथप्रति उत्तरदायी कि जनताप्रति ?
१५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पहिलो महिनाको तलब पशुपति विकास कोषलाई दिएपछि यो विषय बहसमा तानिएको छ । बुधबार केही राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले सम्पादकीय नै लेखेर राष्ट्रपतिले मन्दिरमा तलब चढाउनुभन्दा भूकम्प पीडितलाई दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशय प्रकट गरेका छन्...
केपी ओलीले मन्त्रालय फुटाएर ठीक गरे या बेठीक ?
मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै पाँचवटा मन्त्रालय फुटाइदिएका छन् । एउटै मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यकोषमा अर्बौंको दबाव पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमलाई वाध्यताको उपज बताउँदै प्रतिरक्षा गरेका छन् भने सत्तारुढ दलहरुभित्रै यसको गम्भीर आलोचना भइरहेको छ । ओलीले गरेको कामप्रति...
सीमानामा घुसपैठ रोक्न के गर्नुपर्ला ?
तराई मधेसमा जारी आन्दोलनसँगै नेपाल र भारतबीच पछिल्ला दिनमा सम्बन्ध चिसिएको छ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा सहभागी भारतीय नागरिक प्रहरीको गोली लागेर मारिएपछि स्थिति थप असहज बनेको छ । नेपाल-भारतको खुल्ला सीमानाका कारण पनि आपराधिक गतिविधि बढ्ने, आन्दोलनमा घुसपैठ हुने र उच्छृङ्खल समूहले समस्या...
कसलाई राष्ट्रपति बनाउँदा बेस होला ?
नेपालीहरुको महत्वपूर्ण चाड दसैं सकिएलगत्तै देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउन लागेको छ । राष्ट्रपतिका लागि संसद सदस्य नरहेका सर्वसाधारण नेपाली जनताले पनि दरखास्त दिन पाउँछन् । तर, राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुले मतदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएका नामहरुमा एमालेका विद्या...
नाकाबन्दीले भारतलाई घाटा भयो कि नाफा ?
छिमेकी मुलुक भारतले ११ दिनसम्म अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपालीहरुले ठूलै समस्या झेल्नुपर्‍यो । तर, ११ दिनपछि भारतले आफैं नाकाबन्दी खोलेको घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । यसक्रममा भू-परिवेष्ठित मुलुकको आपूर्ति रोकिएकोमा भारतको चर्को आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै नेपालीको सदभाव बटुलेका भारतका...
तपाई के भन्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्री अमेरिका जानु ठीक कि बेठीक ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको टोली बुधबार अमेरिका प्रस्थान गर्दैछ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायतले देश संकटमा परेका बेला वार्ता र सम्वादमा जुट्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विदेश नजान आग्रह गरेका छन् । संविधान बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले असोज १० भित्र राजीनामा...
नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउँदा ठीक होला ?
संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु हुन थालेको छ । संविधान जारी भएको एक साताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री र एक महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा छ । अब को होला त नेपालको...
आङकाजीलाई समातेर प्रहरीले ठीक गर्‍यो कि बेठीक ?
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा केही लेखिरहने संघीय समाजवादी फोरमका नेता आङकाजी शेर्पा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तरगत मुद्दा चलाइने प्रहरीले बताएको छ । आदिवासी जनजातिहरुले भने आङकाजीको गिरफ्तारीलाई भेदभावपूर्ण भन्दै उनको तत्काल रिहाइको माग गरिरहेका छन् । आङकाजीले आफ्नो फेसबुकमा निश्चित...
तपाई वार्ताको पक्षमा कि फटाफट संविधानको ?
संविधानसभाले फटाफट प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका बेला तराई मधेसमा व्यापक आन्दोलन उठिरहेको छ । यो आन्दोलनसँगै प्रमुख तीन दलका नेताहरु संविधान निर्माणको प्रक्रिया फटाफट अगाडि बढाउने कि केही ढीलो गरेर भए पनि आन्दोलनकारीहरुसँग वार्तामा बस्ने भन्ने अलमलमा परेका छन् । नेकपा एमालेका नेताहरु अहिलेको आन्दोलनलाई...
टीकापुर काण्डबारे योगेश भट्टराईको टिप्पणीलाई के भन्ने ?
कैलालीको टीकापुरमा गतसाता भएको हत्याकाण्डमा एमाओवादीको योजना रहेको र त्यसमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको हात रहेको भन्ने एमाले सचिव योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई लिएर यतिबेला तरंग आएको छ । भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्तिले दुबै दलका नेताहरु चकित परेका छन् । तपाईको विचारमा एमालेको सचिवजस्तो जिम्मेवार...
कांग्रेस काठमाडौं अधिवेशन आज, सभापतिमा नरोत्तम वैद्यको उम्मेदवारी
बेलायतमा इमोजन आँधीको चेतावनी
इनरिकेको १०० औं खेलमा बार्सिलोना विजयी
मेरी श्रीमतीः यशोदासँग दुईपटक बिहे गरेँ